कनाजावा, मध्ययुगीन जापानको आकर्षणको साथ यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | मार्गदर्शकहरू, जापान
म जापानको लागि नयाँ यात्राको आयोजना गर्दैछु, जुन एक देशको साथ म मायाको पागल भएको छु। मेरो चौथाई यात्रा, त्यसैले मैले पेन्सिल तिखार्नु पर्छ र गन्तव्यहरू र अनुभवहरू पत्ता लगाउनुपर्नेछ। अविश्वसनीय रूपमा मैले कहिले पनि भित्र पस्न सकेन कनाजावाएक चीज वा अर्कोको लागि मैले सँधै यो आकर्षक शहर छोडेको छु। थोरै समय, धेरै चिसो, टोक्यो लत...
तर यस पटक म कानाजावा जाँदै छु र त्यो मात्र होईन, म यसलाई अझ राम्रोसँग बाँच्नको लागि केही रात बस्दै छु। यदि तपाईं जापानलाई चिन्नको लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भने मेरी गल्ती नगर्नुहोस् र कानाजावा जान केहि समय लिनुहोस्, जापान रेल पाससँग यो मोलतोल छ र तपाईं शानदार बनाउन सक्नुहुन्छ दिन यात्रा। लक्ष्य लिनुहोस्!
2 कसरी कानाजावा जाने
3 कानाजावामा के हेर्ने
सामन्ती समयमा जापानको सब भन्दा शक्तिशाली वंश तोकुगावा परिवार थियो तर तुरुन्तै पछि यो थियो Maeda परिवार। यस शक्तिशाली जमातको मुख्यालय ठ्याक्कै कानाजावा शहर थियो त्यसैले कुनै समय यो क्योटो वा पुरानो टोकियो, इडोसँग तुलना गर्न सकिन्छ।
सबै भन्दा राम्रो त्यो हो WWII को भयानक बम एक डेन्ट बनाएन। क्योटो र कनाजावा दुबै विनाशबाट बच्न सके त्यसैले आज तपाईसँग मूल्यवान् वास्तुकलाको खजाना छन्। यो हाल इशिकवा प्रान्तको राजधानी हो त्यसैले आउनुहोस् कसरी जान्ने र कसरी जान्ने।
कसरी कानाजावा जाने
यो सबै तपाइँको मूल बिन्दु मा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईं टोकियोमा हुनुहुन्छ भने सब भन्दा छिटो तरिका यो गर्नु हो Shinkansen, जापानी बुलेट ट्रेन। यदि तपाईंसँग जापान रेल पास छ भने धेरै, अन्यथा यात्रामा तपाईंलाई एक ठूलो हिसाबले $ १ cost० खर्चिनेछ, अधिकतम तीन घण्टा लिई। धेरै सस्तो बस छ, दैनिक र रात, लगभग dollars 45 डलरको दरको साथ, तर यसले करीव सात वा आठ घण्टा लिन्छ। स्पष्ट रूपमा तपाई हवाईजहाजबाट पनि जान सक्नुहुन्छ तर मूल्य २०० डलर भन्दा बढी छ।
मेरो मामलामा, म काजागुचिको तालबाट कानाजावा पुग्छु त्यसैले हो वा हो म शिyoकन लिन टोकियो फर्कनु पर्छ किनभने ताल र कानाजावा बीच कुनै सीधा रेल वा बस छैन। र एक पटक शहर मा तपाईं कसरी वरिपरि गर्नुहुन्छ? ठिक छ, यदि तपाईं हिड्न चाहनुहुन्छ भने, पैदल, सबै नजिकको छ। यदि तपाईं लिन सक्नुहुन्न कनाजावा लूप बस जुन धेरै स्टेशनहरु संग मुख्य स्टेशन जोड्छ।
Este लूप बस दुबै दिशामा र १ 15 मिनेटमा बित्छ यो धेरै सस्तो छ, लगभग दुई डलर अधिक केहि छैन। त्यहाँ अर्को अर्को टुरिस्ट बस छ जुन हो केन्रोकुएन शटल यो स्टेशन बाट प्रत्येक २० मिनेट छुट्छ र यात्रा को लागी एक डलर र दुई साप्ताहिक वा छुट्टी मा लागत। यसले स्टेशनलाई केन्रोकन गार्डनसँग जोड्दछ, सम्पूर्ण जापानमा सब भन्दा सुन्दर। तपाईं फाइदा लिन सक्नुहुन्छ र २ hour घण्टाको बस पास खरीद गर्न सक्नुहुन्छ जुन बसहरूको प्रयोगलाई अनुमति दिन्छ र निश्चित पर्यटक साइटहरूमा छुट दिन्छ।
त्यहाँ छ JR बस जहाँ तपाईं JRP को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यो स्टेशनबाट पार्क जान्छ। यसले एक घण्टाको लगभग तीन पटक काम गर्दछ र यात्रा १२ मिनेट मात्र रहन्छ। JRP बिना यसको लागत $ २ छ। यदि तपाईं भित्र हुनुहुन्छ क्योटो तपाईं सीमित एक्सप्रेस ट्रेनहरू, जेआर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यात्रा दुई घण्टा लामो हुन्छ र यसको लागी $ $ costs लागत यसको जेआरपीले कभर गरेको छ। तपाईं स्थानीय ट्रेनहरूमा पनि जान सक्नुहुनेछ तर यसले चारदेखि पाँच घण्टा लिन्छ किनकि तपाईंले परिवर्तन गर्नुपर्दछ। अर्को विकल्प बस हो जुन $ and$ र $ $० को बीच लागतमा र चार घण्टा लाग्छ। बीचको दूरी ओसाका र कनाजावा धेरै समान छ।
कानाजावामा के हेर्ने
मैले माथि बारेमा कुरा गरें केन्रोकुएन बगैचा जापान मा एक सबै भन्दा सुन्दर बगैंचा को रूपमा, तर धेरै विशेषज्ञहरूको लागि सबै भन्दा सुन्दर। यो कनाजावा महलको बाहिरी बगैचा हो र मैडा कुलको समयमा निर्माण गरिएको थियो। यो केवल १ 1871१ मा जनताको लागि खोलियो र सुन्दर फूल र रूखहरूले भरिपूर्ण भयो। प्रत्येक मौसम एक फरक बगैचा हेर्न को लागी छ।
भित्र त्यहाँ हस्तशिल्प, स्मारक, ढु la्गाका लालटेन, झरना, झरना, चिया घरहरूको संग्रहालय छ ... यो पार्क पर्यटक बस मार्गमा छ र बिहान7देखि दिउँसो6सम्म खुल्छ। प्रवेश केवल तीन डलर भन्दा बढी छ। अर्कोतर्फ हामीले भनेका कनाजावा एउटा सहर हो जुन अलाइड बमबाट जोगियो त्यसैले यसका धेरै पुराना भवनहरू छन् र तीमध्ये धेरै तथाकथितमा केन्द्रित छन्। चिया घर र गीशासहितको हिगशी चाया जिल्ला।
शहर यी मध्ये तीन जिल्लाहरु छ chayas वा चिया घरहरू गेशासद्वारा सञ्चालित: हिगाशीको, निशि र काजुएमाचीको। ती मध्ये, हिगाशी सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा सुन्दर हो। यहाँ जनताको लागि दुई चिया घरहरू खुला छन्, कैकारो र शिमा, र धेरै पसल र क्याफेहरू। छाया कैकारो बिहान9देखि साँझ5सम्म खुल्छ र यसको लागत $। छ र शिना एक घण्टा पछि बन्द हुन्छन् र $ costs लागत गर्दछ। हिगाशी स्टेशनबाट १० मिनेटमा लुप बसबाट आइपुगेको छ।
जापान र Ninjas। कस्तो कथा! र म्याडा क्लानको उनीहरु थिए, स्पष्टतः यदि तपाई निन्जास र समुराई चाहानुहुन्छ भने तपाईले भ्रमण गर्नुपर्नेछ। Myoryuji मन्दिर, को रूपमा पनि परिचित निन्जा मन्दिर। किन? ठिक छ, किनकि यससँग धेरै लुकेका रक्षात्मक निर्माणहरू छन्। यो शोगुन, मध्ययुगीन जापानका सबै सामन्ती शासकहरूको सबैभन्दा शक्तिशाली सामन्ती शासक थियो, जसले आफ्ना विरोधीहरूलाई कमजोर बनाउन केही निर्माण नियमहरू लगायो। त्यसो भए, माईडासले एउटा भवन निर्माण गरे जुन ती नियमहरूको पालना गर्‍यो तर भित्रबाट भिन्न थियो।
त्यो हो, यस मन्दिरको छ लुकेका मार्गहरू, भाग्ने मार्गहरू, चक्रव्यूह कोरिडोरहरू, सुरक्षा। मन्दिर भन्दा बढी यो लुकेको सैन्य किल्ला थियो जसले परिवारको महल सुरक्षित गर्थ्यो। आज तपाई एउटा यात्रा मार्फत सबै कुरा जान्न सक्नुहुनेछ कि यो जापानी भाषामा भए पनि अंग्रेजीमा एउटा प्याम्प्लेट प्रदान गर्दछ- तपाई लूप बसमा आइपुग्नुहुन्छ जुन हिरोकोजी स्टपमा बन्द हुँदैछ। यो बिहान9देखि साँझ :4: .० सम्म खुल्छ र। १० लागत।
हामीसँग समुराई विषयवस्तु जारी राख्दै नागामाची वा समुराई जिल्ला जुन महलको पाउमा छ। यो जहाँ समुराईहरू र उनीहरूका परिवारहरू बसोबास गर्थे र यसका सडकहरू र घरहरूले पुरानो आकर्षणको संरक्षण गरेका छन्। घरहरू, निजी बगैंचा, नहरहरू, गल्लीहरू। तपाइँ विशेष गरी Nomurake र पुरानो फार्मेसी, Shinise Kenenkan, अब एक संग्रहालय भनिन्छ एक बहाल समुराई घर सम्झन सक्नुहुन्न। समुराई घरको प्रवेश द्वारको लागत dollars डलर छ र संग्रहालय सस्तो छ, १ डलर मात्र।
अन्ततः त्यहाँ छ कनाजावा महल२१ औं शताब्दीमा समेत, धेरै पटक नाश र पुनर्निर्माण गरियो। प्रवेश निःशुल्क छ। यो सत्य हो कि सायद एक दिन कानाजावा चिन्नको लागि पर्याप्त छ तर यदि तपाइँ अभिव्यक्त पर्यटन मन पराउनुहुन्न भने, एक वा दुई रात बस्न सल्लाह दिइन्छ, यदि तपाइँलाई मनपर्‍यो भने वरिपरि भ्रमण। ती मध्ये एक हिमाली क्षेत्र को माध्यम बाट पैदल लिन्छन् शिराकावागो र गोकायामा, विश्व विरासत।
त्यहाँ मुठीभर गाउँहरू छन् जुन धेरै परम्परागत छप्पर घरहरू छन्, बुद्धका हातहरू जस्ता छाना छाना सहित। एक खास शैली जुन दुबै गर्मी र जाडोमा, जब हिउँ पर्दछ र तिनीहरूलाई छोप्छ, हड्तालजनक छ। तिनीहरूसँग एकल नेल छैन र अटिकमा मैन कीरा बढ्छ। सबै गाउँहरू मध्ये सबैभन्दा भ्रमण गर्न सिफारिस गरिएको हो Ogimachi।
यहाँ तपाईं खुला एयर संग्रहालयमा घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ जसको प्रवेश लागत6डलर छ। गाउँको पोस्टकार्ड को लागी तपाइँ जानु पर्छ शिरोयामा दृष्टिकोणडाउनटाउनबाट २० मिनेट जति। कानाजावाबाट तपाई ओगीमाची पुग्नुहुन्छ। साधारणतया यी सबैलाई हेर्दा तपाईसँग कनाजावाबाट राम्रो पोस्टकार्ड छ। तपाईंलाई थाहा छ, यदि तपाईं टोकियो गगनचुम्बी भवन, यात्रा, यात्रा, यात्राबाट थकित हुनुभयो भने।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » मार्गदर्शकहरू » कनाजावा, मध्ययुगीन जापानको आकर्षणको साथ
बुडापेस्टको लागि यात्रा, के हेर्न र म गर्न सक्छु
ट्राफिक लाइटले २०१ St. बाट सेन्ट मार्क स्क्वायरमा पहुँच नियन्त्रण गर्नेछ